Ciraaq: Daacish oo dad ku laysay Baqdaad - BBC News Somali
Ciraaq: Daacish oo dad ku laysay Baqdaad
Image caption Weerarkan ka dhacay degmada Al-Nasr ee caasimadda Baqdaad waxa sheegatay Daacish
Qarax baabuur oo ka dhacay degmada Al-Nasr ee magaalada Baqdaad oo ay ku badanyihiin Shiicadu ayey ku dhinteen ugu yaraan 18 qof waxaana ku dhaawacmay 42 kale, waxaana sidaa sheegay xog laga helay nabad sugidda Ciraaq.
Kooxda la baxday dawladda Islaamka ayaa weerarkaa sheegatay. War ay wakaaladda wararka ee France Press ka soo xigatay wasaaradda arimaha gudaha Ciraaq ayaa sheegay in qaraxu ka dhacay goob lagu iibiyo baabuurta oo ku taal xaafadda Al-Xabiibiya ee bariga Baqdad.
Weerarkani wuxu dhacay maalin keliya uun ka dib markii baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ku qarxay koonfurta Baqdaad oo uu ku dilay ugu yaraan afar qof.
Weerar kan la mid ah oo ka dhacay degmada Al-Nasr ayaa bishii hore ee Jeeniwari waxa lagu dilay 35 qof , waxaana isla weerarkaa sheegatay kooxda Daacish.
Tan iyo bilawgii sannadkan Baqdaad waxa ka dhacayey weerarro is daba joog ah, laakiin tiradada weeraradaasi haatan way soo yaraanaysaa.